भ्रमण बर्षमा तनहुँ भीमादको सिद्धगुफामा १ लाख पर्यटक भित्र्याउने,मन्त्री लम्साल द्धारा शुभारम्भ - News site from Nepal
नेपाल पर्यटन बर्ष २०२० को अवसरमा तनहुँको भीमाद नगरपालिका वडा नं. ७ धन्धुरस्थित सिद्ध गुफामा एक लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिईएको छ । एक सय नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा सूचीकृत सिद्धगुफामा भ्रमण वर्षको शुरुवात गरिएको छ । सरकारले घोषणा गरेको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल बनाउन सिद्धगुफा विकास समितिले औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी भ्रमण वर्षको शुरुवात गरेको हो ।
सिद्धगुफामा आज आयोजित कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले भ्रमण वर्षको शुरुवात गर्दै सरकारको अभियानमा सहयोग पु¥याउनु सबैको कर्तव्य भएको बताउनुभयो । पर्यटन समृद्धिको आधार रहेको चर्चा गर्दै मन्त्री लम्सालले सरकारले पर्यटकीय गन्तव्यको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । मन्त्री लम्सालले भ्रमण बर्षलाई बर्षभरीनै उत्सवका रुपमा मनाउन आव्हान गर्नुभयो । स्थानिय स्तरमा रहेका ऐतिहासिक धार्मीक पर्यटकीय स्थल मठ,मिन्दर,प्राकृति प्राचुर्याताका डाँडाकाडा,भ्यूप्वाईन्ट,नदी,नाला,ताल तलैया लगाएतका पर्यटकीय स्थलहरुको प्रचार प्रसारमा लाग्न स्थानियवासीलाई आग्रह गर्नुभयो ।
मन्त्री लम्सालले गण्डकी प्रदेश प्रकृतिले दिएको स्वर्गको टुक्रा जस्तै रहेको बताउदै प्राकृति,संस्कृति र शाहासिक पर्यटनका लागि गण्डकी प्रदेश उत्कृष्ट रहेको दाबी गर्नुभयो । संसारमा नभएको पर्यटन गण्डकी प्रदेशमा रहेको चर्चा गर्दै पर्यटकको आकर्षण वृद्धि गर्न प्रदेश सरकारले नयाँ योजना अगाडी सारेको बताउनुभयो । उहाँले प्रत्येक जिल्लाका चार÷चार वटा पर्यटकीय गन्तव्यको पूर्वाधार निर्माणको लागि प्रदेश सरकारले बजेट बिनियोजन गरी आकर्षीत तथा व्यवस्थित बनाउन लागेको बताउनु्भयो ।
सोही अवसरमा मन्त्री लम्साल मार्फत भिमादमा रहेका गुरुङ,ब्रहमण,मगर,परियार,विश्वकर्म,मिजार,मुस्लिम लगाएतका जातजातीहरुले आ—संस्कृति देखाउदै भिमाद भ्रमणको निमन्त्रणा दिएका थिए ।
कार्यक्रममा भीमाद नगरपालिकाका प्रमुख मेखबहादुर थापाले नगर क्षेत्रभित्र रहेका पर्यटकीय स्थलको प्रबद्र्धनमा नगरपालिका जुटेको बताउनुभयो । भीमादलाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने योजानाका साथ अगाडी बढेको बताउदै पर्यटकीय सम्भावना रहेका त्यस्ता किसिमका ठाउँको पहिचान गरी डीपीआर तयार मा जुटेको बताउनुभयो । उहाँले सिद्ध गुफा लगाएतका पर्यटकीय क्षत्रको भ्रमण गरि भ्रमण बर्षलाई सफल बनाउन अपिल समेत गर्नुभयो ।
धेरै भन्दा धेरै पर्यटकलाई सिद्धगुफामा भित्र्याउने उद्देश्य सहित गुफाबाटै भ्रमण वर्षको शुरुवात गरिएको सिद्धगुफा विकास समितिका अध्यक्ष दधिराज सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पर्यटक आकर्षित गर्न गुफाममा पूर्वाधार निर्माण समेत गरिएको छ । गुफाको व्यापक प्रचारप्रसार गरी पर्यटकलाई यस ठाउँमा आकर्षित गर्न पहल गरिने विकास समितिले जनाएको छ ।
गुफा भित्र झन्डै ३ सयजना बस्न मिल्छ । यस गुफामा तीन तलासम्म मज्जाले हिंड्डुल गर्न मिल्छ भने प्राकृतिक रुपमा कुँदिएका विभन्न आकृतिहरु देख्न सकिन्छ । गुफा नजिकै चमेरो गुफा पनि छ । यो नेपालकै लामो भएको सुवेदीले दाबी गर्नुभयो । यहाँ सहज रुपमा सवारीसाधन आउँजाउँ गर्न मिल्छ । ओझेलमा परेको सिद्ध गुफालाई अब चर्चामा ल्याउने उहाँले बताउनुभयो ।
पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न पाँच वर्षअघि पञ्च वर्षीय गुरुयोजना बनाएर सिद्ध गुफा क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा गुफा विकास समिति निरन्तर जुटेको छ । जिदीखोलीदेखि सिद्धगुफा, सिद्ध गुफादेखि चमेरो गुफासम्म सिंढी बाटो निर्माण गरिएको छ । समितिले सिद्ध बाबाको मन्दिर, बाराही मन्दिर, ४ प्रतीक्षालय, २ सुविधासम्पन्न शौचालय निर्माण गरेको छ । पर्यटकलाई मध्यनजर गर्दै सिद्ध गुफा क्षेत्रमा वनभोज स्थल समेत तयार गरेको छ । सवारी साधनलाई व्यवस्थित गर्न पार्किङ स्थल बनाइएको छ । पर्यटकीय गन्तव्य कार्यक्रमको ५० लाख रुपैयाँ, श्रमशिवर सहित अहिलेसम्म पूर्वाधार निर्माणमा झण्डै एक करोड रुपैयाँ खर्च भइसेको छ ।
पोखरामा मगर एकता दिवसः झुटो नबोल्ने मगर समुदायको परिचय
पर्वतको खुर्कोटकी मृगौला पिडित महिलालाई प्रवासीद्धारा आर्थिक सहयोग प्रदान
माले महासचिव मैनाली छोरा, बुहारी र नातिसहित परे दुर्घटनामा, हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं ल्याउने तयारी
पर्वतवासीलाई खुसीको खबर ! पर्वत अस्पतालमा छाला रोग विशेषज्ञवाट उपचार शुरु
पर्वतको मुडिकुवामा रहेको गहते आम्वोट आधारभुत विद्यालयमा फिल्डर हस्तान्तरण
नेकपा गण्डकी प्रदेशको १३ सदस्यीय सचिवालय गठन, – हेर्नुहोस् को को परे !
पर्वतको पाङ र बागलुङ जोड्ने नेपालकै अग्लो र लामो पुल अन्तिम चरणमा
पर्वतको तिलाहारमा बहुउद्देश्यीय भवन बन्ने
प्रहरीमा अनियमितता : हुँदै नभएका प्रहरीलाई समेत तलब !
पर्वतको धाईरिङका खेम क्षेत्री, जसको मेहनतले बर्षौ देखि बाँझो रहेको जमिन भयो तरकारी र फलफुल खेतीले हराभरा
पर्वतको फलेवासमा फागुन २२ गतेदेखि राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड तथा दोस्रो मेयर कप प्रतियोगिता